“Sharciga la dagaallanka Burcad-Badeedka waxaa laga soo qoray Xalane oo ma ahan mid Soomaali ay leedahay” – Kalfadhi
“Sharciga la dagaallanka Burcad-Badeedka waxaa laga soo qoray Xalane oo ma ahan mid Soomaali ay leedahay”
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa shalay (Arbaco) akhrinta koowaad marsiiyay Hindise-sharciyeedka dib-u-eegista Sharciga la dagaallanka Burcad-Badeedka oo ka hortaga af duubka ee Sharciga LR. 36 April 1975.
Sii hayaha wasiirka wasaaradda cadaaladda Mudane Xasan Xuseen Xaaji, ayaa baarlamaanka u akhriyay sharciga, isla-markaana ka jawaabay su’aallaha xildhibaannada ay ka qabaan sharciga.
Xildhibaan Cabdi Ali, ayaa sharciga baarlamaanka la keennay ku qeexay in uu yahay sharci laga soo qoray Xalane, islamarkaana uusan aheyn sharci Soomaali leedahay oo ka hadlaya arrin Soomaaliyeed ama wasaarad ka yimid.
Marka burcad-badeed la qeexayo waxaa lagu qeexayaa wiilasheenna Soomaaliyeed. Burcad-badeeda ugu weyn waa cida kalluunka ka xadeysa baddeena, cida afduubta wiilasheenna iyaga oo kalluumeysanaya yiraahda waa burcad-baddeed, cidaasi ayaa ah burcad-baddeed, ayuu yiri.
“Xeebta liido waxaa daadsan jey, maraakiib ayaa jamaladeenii bur-burineysa, markaasi ayaa xeebta waxaa soo buuxiyay jey badan. Miinooyin ayaa lagu qarxinayaa jamalada, mar dhow waxaa la arki doonaa liido oo jeyga laga dal-dalanayo si guryaha loogu dhisto “.
Sharciga waxaa uu handadayaa wiilasha Soomaaliyeed, burcad-badeed waxaa ah kuwa suntan ku daadiya badeena isla markaana xada kalluunkeena, ayuu yiri xildhibaan Cabdi Ali.
Sii hayaha wasiirka Cadaaladda Mudane Xasan Xuseen Xaaji, ayaa yiri “Sharicgaan waxa uu muuhiim u yahay dalka waana loo baahanyahay in dib-u-eegis lagu sameeyo si aan xal ugu helno baddeyna maadaama ay jiraan maraakiib si sharci darro usoo galo dalka iyo sidii aan xal ugu heli laheyn arrimaha burcad baddeeda.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur-Galbeed iyo Wasiirka Shaqada oo barnaamijka Baxnaano ku daah-furay magaalada Baydhabo
Xukuumadda oo meel marisay 5 xubnood oo kamid noqonaya Golaha Adeegga Garsoorka iyo xubnaha Maamulka Hey’adda Batroolka
Guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne Guudlaawe oo la kulmay Senatarada cusub ee Hirshabelle
Mareykanka oo ugu baaqay Rooble iyo Farmaajo in ay xaliyaan khilaafkooda, diirradana la saaro doorashada
Archives Select Month September 2021 (24) August 2021 (54) July 2021 (67) June 2021 (60) May 2021 (91) April 2021 (87) March 2021 (106) February 2021 (82) January 2021 (92) December 2020 (107) November 2020 (79) October 2020 (84) September 2020 (107) August 2020 (103) July 2020 (110) June 2020 (62) May 2020 (28) April 2020 (37) March 2020 (44) February 2020 (40) January 2020 (35) December 2019 (55) November 2019 (58) October 2019 (52) September 2019 (74) August 2019 (43) July 2019 (26) June 2019 (60) May 2019 (108) April 2019 (127) March 2019 (143) February 2019 (152) January 2019 (147) December 2018 (162) November 2018 (103) October 2018 (75) September 2018 (58) August 2018 (46) July 2018 (46) June 2018 (39) May 2018 (67) April 2018 (36) March 2018 (4) February 2018 (9) January 2018 (9) December 2017 (8) November 2017 (2) October 2017 (11) September 2017 (6)